Laser Die Cutting uye rokutendeutsa nokuda Label, namira Zvekushandisa, Retro-tichifungisisa Kutamisirwa Film - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Flatbed Laser Kucheka Machine
Alibaba Gold nokutengesa
Laser Die Cutting uye rokutendeutsa nokuda Label, namira Zvekushandisa, Retro-tichifungisisa Kutamisirwa Film
Laser Die Cutting uye rokutendeutsa Machines
Golden Laser - Laser SYSTEM FOR kufa kucheka Kupedzwa Labels
About Digital rokutendeutsa System
With kukurumidza kukura kwenzanga uye diversification uye individuation yavanhu zvipenyu zvinodiwa, digitaalinen zvemichina rave akasimudzira uye kudhinda nzira vave kuchinja nguva dzose. Digital Kudhinda rava chinhu kusingarapiki kuitika munyika indasitiri, sezvo nhamba iri kuwedzera pfupi run mabhizimisi, madiki customized mabhizimisi, uye zvakatipoteredza-ushamwari zvinodiwa, mutengo okuponesa.
Munhu zvichienderana digitaalinen zvokudhinda dzinokwezva dzakawanda chitaridzi uye pasuru yokudhinda vagadziri nokuda kwayo dzichimhanya akurumidze, yepamusoro quality, akangwara kugadzirwa uye kushandisa michina rikurumidze.
Sezvo digitaalinen kudhindwa inokura, saka anoita Laser ufe nokuveza!
Pfungwa yedu ndiko kupa vatengi hwakazara zvakawanda chitaridzi kupedza dambudziko. Our modular, mukuru-kuita chitaridzi Laser kufa nokuveza uye kupedza mhinduro akagadzirirwa kusangana zvaunotarisira Virtual zvebhizimisi zvinodiwa, saka unogona kupa itsva chitaridzi mhinduro vatengi yenyu.
Ndezvipi zvakanakira Laser ikafa nokuveza Labels?
Golden Laser kwakaita Laser vanofa-achicheka michina vari aikosheswa zvikuru chitaridzi vaburitsi sezvo vanogona kuumba guru siyana zvisiri mune rimwe, mukuru-nokukurumidza, zvakazara zvoga muitiro.
Time kuchengetedza. No kudiwa kuti achitanga, kubvisa yainetsa anoumba kuita nguva.
Kucheka zvinhu uye Graphics anogona kuchinja chero nguva. The Laser zvinowanikwa zvakawanda configurations: pamwe chete kana kaviri Laser kunobva.
The Galvo Hurongwa anobvumira danda kufamba nokukurumidza, achikudzwa zvakakwana focalized pamusoro yose nokushanda nzvimbo. High-nokukurumidza nokuveza kugutsa zvinodiwa vatengi 'munguva chaiyo.
Boka nyika CO2 RF Laser kunobva. Kunaka chekawo ndiyo nguva yakakwana uye kugara pamusoro nguva yakaderera mutengo nazvo.
Nokuti zvakarurama nokuveza uye zvakadzama vaifarira zvikamu. Kombiyuta anokubatsirai yakakwirira nokuveza zvakarurama kunyange achicheka Labels ane mugari pakakoromoka.
Modular multi-chiteshi mabasa akadai flexo yokudhinda, laminating, UV varnishing, slitting, uye rewinder, etc.
Dzakakodzera kushanda zvakasiyana-siyana zvinhu
Glossy bepa, Matt bepa, makadhibhokisi, polyester, polypropylene, mapurasitiki, firimu, etc.
Akakodzera dzakasiyana siyana basa
Laser kufa achicheka namarudzi chimiro - zvizere nokuveza nekutsvodana okukohwa (hafu nokuveza), perforating, achiita zvokutemera, zvichiratidza, manhamba, etc.
Golden Laser ndiyo kambani rokutanga China kuunza Laser vanofa-cheka michina kupinda kavha & Kunyora indasitiri. Its modular multi-yemapurisa mukuru-nokukurumidza Laser vanofa-cheka muchina unogona kutsiva dungwerungwe zvetsika chete nerevane michina yakadai zvetsika vanofa-kutema muchina, slitting muchina, laminating muchina, varnish flexo wokudhinda, punching muchina, uye rewinder.
Laser kufa kwedu nokuveza uye kupedza zvingaitwa panguva kubudirira flexo yokudhinda, laminating, nokuveza, hafu-nokuveza, scribing, punching, achiita zvokutemera, Serial chiverengero, kupisa tsikwa uye slitting . It akatiponesa mari vakawanda michina mari, uye mutengo basa uye chekuchengeta zvekudya kudhinda uye kavha vagadziri. Zvinowanzoshandiswa kudhinda Labels, mabhokisi kavha, kwaziso makadhi, maindasitiri matepi nezvimwe maindasitiri.
Golden Laser Features - QR Code / Barcode Vision Recognition System
Kucheka dzichimhanya, miganhu kuchinja mabasa pamusoro-the-nhunzi.
Camera rwoga kutarira kucherechedza QR code / Barcode.
Kubvisa zvinhu tsvina.
Zero marongero nguva Graphics kuchinja, yakanakisisa naye pamusoro digitaalinen vaidhinda.
Maximum Web dhayamita 600mm / 23.6 "
Web Speed 0 ~ 80m / Maminitsi (Speed ​​dzinosiyana Graphics sezvo zvakasiyana, zvinhu, thicknesses)
Laser Source chisimbiso CO2
Laser Cutting zvakarurama ± 0.1mm
Magetsi 380V 50Hz / 60Hz, Three danho
Maximum Web dhayamita 400mm / 15,7 "
Laser nokuveza zvakarurama ± 0.1mm
Modular design, zvikuru kuchinja neezvitendero uye uchida configurations
Standard configuration: unwinding + padandemutande gwaro + Laser ikafa nokuveza + tsvina kubviswa + kuroorwa ichitenderera
More kuita: digitaalinen kudhinda / chando foil / varnish / chinovhara yokudhinda / sandara nokuveza / inopisa tsikwa / kumativi banga ikafa nokuveza / kaviri ichitenderera ...
Paper, makadhibhokisi, tichifungisisa zvinhu, 3M maindasitiri tepi, PP, PET, polyimide, polymeric, mapurasitiki uye firimu zvokuvakisa, etc.
Food uye chinwiwa Labels, zvizoro Labels, mhuri mudziyo Labels, zvemagetsi chigadzirwa Labels, tichifungisisa Labels, mabhokisi chipo kavha, zvemagetsi zvinoriumba gaskets, etc.
Vamwe Labels Mharidzo
CHINOTYISA mabasa Laser Die kucheka MACHINE MAKAITA!
Application Industry uye Customer Case Kugoverana
Digital kudhindwa indasitiri
Nokukurumidza uye mari yakawanda chitaridzi kugadzirwa michina
E Company iri akaigadzira Labels akadhindwa kwemakore anopfuura 50 muCentral America. Kuwedzera duku mavhoriyumu customized mirairo, mari chinyakare vanofa-nokuveza Labels akanyanya kukwirira kusangana mutengi wacho akakumbira Delivery musi.
Pakapera 2014, boka akasuma wechipiri-chizvarwa digitaalinen Laser kufa nokuveza uye kupedzisa hurongwa LC-350 kubva Golden Laser, pamwe laminating uye varnishing mashandiro kusangana vatengi 'zvakawanda customized zvinodiwa.
Panguva ino, ungano rava kupfuura kugadzirwa nehwaro Labels akadhindwa uye kavha zvigadzirwa munzvimbo, uye akunda mibayiro yakawanda kubva hurumende dzematunhu, achiva zvikuru yemakwikwi chitaridzi kugadzirwa kambani.
Small-nemanyorerwo varnish + Laser vanofa-achicheka maviri-in-mumwe mudziyo
T kambani iri mugadziri wokuGermany digitaalinen kudhinda zvisiri pamwe kare. Rine kunyatsoteerera chaizvo zvinodiwa uye zvinodiwa midziyo zvokuvakisa. Vasati vaziva Golden Laser, vose equipments yavo akatengwa muEurope, uye vaida kuwana duku-youduku UV varnish + Laser vanofa-achicheka vaviri-pane-imwe tsika muchina. Muna 2016, maererano zvinodiwa T kambani, Golden Laser yakatanga customized Laser ikafa nokuveza muchina LC-230. With kudzikama uye yepamusoro nokuveza Chaizvoizvo zviri aikosheswa zvikuru vatengi. Panongotanga mamwe European chitaridzi makambani akawana mashoko, ivo navo Golden Laser uye akarayira Golden Laser kubudisa digitaalinen chitaridzi Laser nokuveza uye kupedza hurongwa kuti zvidikanwi zvavo nomumwe.
M kambani, nyika vaitungamirira akaigadzira Labels akadhindwa, akatenga Laser kufa vakatema michina kubva kuItaly gumi apfuura. Zvisinei, European midziyo inodhura uye kudhura kuramba, vave vachiedza kuwana imwe mhando Laser anofa okurwadzisa muchina. At Labelexpo 2015 muna kweBrussels, meso avo dzakavhenekera pavakaona LC-350 Laser ikafa nokuveza muchina kubva Golden Laser.
Mushure yokuedzwa akadzokorora uye tsvakurudzo, vakazomubata vakasarudza Golden Laser LC-350D kaviri-musoro mukuru-nokukurumidza Laser ikafa nokuveza muchina nani mutengo unongotaura. The Hurongwa Anomhanyira aimhanya anosvika 120 m / Maminitsi, pamwe Semi muhombe chiteshi, rwakapetwa-to-jira kugamuchirwa platforms uye zvimwe mamwe hurongwa kusimbisa akawedzera kukosha mutengi wacho zvigadzirwa.
Zvipfeko uye shangu nenhumbi indasitiri
Retro-tichifungisisa zvinhu Laser nokuveza
R kambani iri kupfuura Whitehead Textile nenhumbi kubudiswa boka kambani kwenyika. Ivo akasuma anopfuura 10 anoita yendarama Laser Mars akatevedzana xy akabatana Laser kucheka michina makore mazhinji apfuura. Sezvo mitemo ichiwanda, avo huripo midziyo havagoni kusangana ayo kugadzirwa zvinodiwa. Golden Laser kwakasimbiswa munhu Laser vanofa-nokuveza marongedzero customization wayo, iro ainyanya kushandiswa nokuveza tichifungisisa zvinhu.
Single / Double Side namira matepi
General zvechadenga ichi mhando matepi:
The inonyanya mupumburu upamhi aizova 350mm
ukobvu kubva 0.05mm kusvika 0.25mm
Full nokuveza uye kutsvoda nokuveza pamusoro mupumburu matepi